theZOMI: [mrsorcerer:38195] ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီး၍ အကြမ်းဖက်နေတာကို ရပ်တံ့ပေးပါ
[mrsorcerer:38195] ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီး၍ အကြမ်းဖက်နေတာကို ရပ်တံ့ပေးပါ
ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီး၍ အကြမ်းဖက်နေတာကို ရပ်တံ့ပေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေး ရေချိန် မြင့်သထက် မြင့်လာနေသည်။
ယခင့်ယခင်က မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေး စာပေများကို အစိုးရနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
အစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းများက ဖြန်ဝေ လှုံ့ဆော်နေကြောင်း ကြားဖူးသော်
လည်း ကိုယ်တိုင် မတွေ့ဘူး မမြင်ဘူးခဲ့။
အင်တာနက်ခေတ်စားလာသော ယခုခေတ်သယမတွင် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများ
အား ပုတ်ခတ်ရေးသားသော အီးမေးလ်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာများ၊
ကော်မန့်များကို နေ့စဉ်လိုလို မြင်နေ ကြားနေရသည်။
ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေဖြင့်
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများကို မေးခွန်းတချို့မေးချင်သည်။ မေးခွန်းများ မမေးခင် ကျနော့်အကြောင်း ပြောပါမည်။
ကျနော်သည် မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားသော မြန်မာပြည်သား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မနေ့တနေ့ကမှ မြန်မာပြည်သို့
တိုင်းတစ်ပါးမှ ၀င်ရောက်လာသူမဟုတ်။ အိန္ဒိယမှ ရွေ့ပြောင်း ၀င်ရောက်လာသော မိဘများမှ မွေးဖွားသည်မဟုတ်။
အဘိုးအဘွားမဆို သူတို့၏ မိဘများပင် ဗမာနှင့် တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်။ ကျနော်သည် မြန်မာ့မြေပေါ်မွေး မြန်မာ့မြေပေါ်တွင်ကြီး မြန်မာကျောင်းတွင် ပညာသင်၍ ဗမာစကားပြောသည်။ ဗမာစာပဲတတ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်
မွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်အတွက် မြန်မာလိုဝတ်သည်၊ မြန်မာပြည်ကိုချစ်သည်။
မြန်မာပြည်သည် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ မြန်မာလူမျိုးသည် ကိုယ့်လူမျိုးဟုခံယူသည်။
ကုလားစကားဟုခေါ်သော တောင်အာရှစကားများမတတ်။ ရေးလည်း
မရေးတတ်။ ဖတ်လည်းမတတ်ပါ။ အိန္ဒိယလည်း မရောက်ဖူး၊ ဆွေမျိုးလည်းမရှိ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရေး စီးပွားရေးသည် ကျနော်နဲ့လည်း မဆိုင်ပါ။ မြန်မာပြည်သာလျှင်
ကျနော့် အမိမြေဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းစေချင်သည်။
ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်စေလိုသည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာနှင့် ဗလီသွားတာပဲကွာသည်။ ကျန်တာကတော့ နေပူလည်း အတူတူ။ မိုးရွာလည်း အတူတူ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်လည်း အတူတူ။ လုပ်အားပေးသွားရလည်း အတူတူဖြစ်သည်။
ရပ်ကွက်ထဲ မီးပျက်လျှင် ကျနော့်အိမ်တစ်အိမ်တည်းကွက်ပြီး လျှပ်စစ်မီးမလင်းသကဲ့သို့ နွေရာသီရေရှားလျှင်လည်း ကျနော့်အိမ်ရေတွင်း တစ်တွင်းတည်းကွက်ပြီး ရေမထွက်ပါ။
စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် တိုင်းပြည်တွင် ကျနော့်တစ်အိမ်တည်း အခွင့်အရေးထူးတွေမရပါ။ ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် အစ္စလာမ်သာလျှင် မှန်ကန်ပြီး တခြားဘာသာတွေ မှားသည်ဟု တခါကမှ မပြောဖူး။ ယုံလည်း မယုံကြည်ပါ။ ကျနော့်မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း စည်းရုံးဝါဒဖြန့်နေသူများ မရှိပါ။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းများတွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားပြီး အစ္စလာမ်ဝါဒဖြန့်ချိနေသူများ မတွေ့ရပါ။
ဘာသာတိုင်း သူ့အယူအဆနှင့်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားဘာသာများကို
လေးစားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်နေထိုင်ရမည်
ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှုရမည်ဖြစ်ကြောင်း အာပေါက်အောင်
ပြောနေသူများသာ ဖြစ်သည်။ အများနည်းတူ ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ကုလားဟုခေါ်ကာ နှိမ့်ချနေမှုများကို ရပ်တံ့ပေးရန်
ဘာသာမတူသူများအကြား နားလည်မှုရစေရန်၊ အမုန်းတရားမပွားစေရန် ကြိုးစားနေသူများ လိုလားနေသူများဖြစ်သည်။ ကျနော်အပါအ၀င် ကျနော့်မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အွန်လိုင်းတွင် သိကျွမ်းရသော မွတ်စလင်မ်သူငယ်ချင်းများထဲတွင် ရှင်ဂေါတမ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ သံဃာတော်များ၊ မယ်သီလရှင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို နှုတ်နှင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်နှင့်ဖြစ်စေ နှိမ့်ချစော်ကားနေသူများ မရှိပါ။
ဗုဒ္ဓအမည်ခံ နိုက်ကလပ်များ၊ Rude Buddha ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်များကိုပင် မလုပ်သင့်ကြောင်း ယူဆသူများ၊ စိတ်မကောင်းသူများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်များကိုပင် ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်များလည်း ရှိပါသည်။
သို့သော် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား အမေနှမများကိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပုံများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နစ်နာအောင် အမျိုးမျိုးစော်ကားနေသည်ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့ရသည်။
ဘိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါသည်ဆိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များပင် ရိုင်းရိုင်းပျပျ စကားလုံး ရင့်ရင့်သီးသီးများဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား လူမြင်သူထင် ဆဲဆိုနေကြသည်။
ဤမျှမက ဆုတောင်းဝတ်ပြုဆောင်များကို ဖျက်ဆီးသူများက တရားဥပဒေကင်းစွာ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်ကို ၀မ်းသာအားရ အားပေးအားမြောက်ပြု ရေသားပြောဆိုနေကြသည်။
ပြောဆိုနေကြသည်များထဲတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ အချက်အလက်မှန်များဖြင့် အပြုသဘောပြောဆိုသည် မဟုတ်ဘဲ စိတ်အထင်ဖြင့် ဘာသာစွဲဖြင့် အမုန်းတရားသက်သက်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နေရသည်။
အချို့ဆိုရင် မွတ်စလင်မ်အကြောင်းမဆိုနှင့် မွတ်စလင်မ် မိတ်ဆွေ (သို့) အိမ်နှီးချင်း (သို့) အသိတယောက်မှ မရှိပေ။ ကြားဖူးနားဝဖြင့် အမုန်းတရားပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား မုန်းတီးနေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူများသို့ မေးခွန်းများ မေးချင်သည်။
သင့်တွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ် သူငယ်ချင်း (သို့ ) အသိရှိပါသလား..? သင်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးပါသလဲ..?
သင့်ကို သူက ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မှားနေပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသာလျှင် မှန်သည်ဟု စည်းရုံးဖူးပါသလား..?
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို သင်သိသော မြန်မာမွတ်စလင်မ်တဦးဦးက ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ စကားလုံးအရေးအသားဖြင့်ဖြစ်စေ စော်ကားဖူးပါသလား..?
သင်လိုအပ်နေချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ဆိုကာ လျစ်လျူရှု ခွဲခြားဆက်ဆံခံရဖူးပါသလား..?
ကျနော်ကြီးပြင်းလာသည့် မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အခြားဘာသာကို စော်ကား စည်းရုံးနေသည့် လူများမရှိပါ။ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိပါ။ ကျနော် လိပ်ပြာသန့်သည်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူသည် ကိုယ်တိုင် စော်ကားခံရဖူးလျှင် ဖြစ်စဉ်အချက်အလက်ဖြင့် ကျနော့်ထံ ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
အများစုဖြစ်သည့် အလယ်အလတ် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများနှင့် လက်တွဲ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖက်မှ ရပ်တည်ပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအား စော်ကားခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း၊ အချို့စွတ်စွဲသည့် "လူမဆန်စွာစည်းရုံးခြင်း" ဆိုသည့် ပြဿနာကို လက်တွဲတိုက်ဖျက်မည်ဟု ကတိပေးသည်။
ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစော်ကားသကဲ့သို့ကျနော့်သာသနာနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီးနေခြင်း၊ စော်ကားပြောဆိုနေခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းများကို ရပ်တံ့ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ပေးပို့သူ » B love